လူလုံးမလှ ဖြစ်လာကြသူများ နှင့် ရုပ်လုံးကြွလာနေသည့် NUG – Moe Tauk Pan
ဝါရှင်တန် ပို့စ် သတင်းစာ ကြီး၏ အယ်ဒီဝာာ အာဘော်မှ ပြည့်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကိုဖြိုးဇေယျာသော် နှင့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား အဖွဲ့ အား ဦးဆောင်သူ တဦး ဖြစ်သူ ကိုဂျင်မီ တို့အား ကြိုးစင်သို့ ပို့မည် ဆိုလျှင် မြန်မာသည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းသို့ ပြန်လည် သွားနိုင်ကောင်းသည် ဆိုသော နောက်ဆုံးလက်ကျန် အလားအလာများကို အသူရာ နက်သည့် ချောက်ကြီးထဲသို့ ပြစ်ချလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သတိပေး လာခဲ့သည်။
ထိုသို့ ကွပ်မျက်ရန် ကြံစည်နေမှု ကဲ့သို့ မတရား အနိုင်ကျင့် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များကို “တရားမဝင် အစိုးရ” ဟု ခေါ်ဝေါ် ကာ ရှုတ်ချလာသည့် ပြင်သစ် သံရုံးအားလည်း နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်နိုင်သည်ဆိုကာ ၎င်းတို့နှင့် မဆက်ဆံက ပြင်သစ် အတွက်ပင် အကျိုးယုတ်ဖွယ် ရှိသည့် ပုံစံဖြင့် ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် လာခဲ့ပြန်သည်။ အလားတူ အမေရိကန် နှင့် ကုလသမဂ္ဂအားလည်း “မစဉ်းစား မဆင်ခြင် လက်လွတ်စပယ် ပြောဆိုသူများ” ဟု ကင်ပွန်းတပ်လိုက် ပြန်သည်။
ဤသည်ကို တုန့်ပြန်သည့် အနေဖြင့် ပြင်သစ် အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန က သံရုံး ကြေညာချက်အတိုင်း ပင် ထပ်မံ၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရားမဝင် အစိုးရ အကောင်အထည် ဖေါ်နေသည့် အကြောက်တရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခုခံ ရင်ဆိုင်နေကြသော မြန်မာ ပြည်သူများ၏ သတ္တိကို လေးစား ဂုဏ်ပြုပြီး မိမိတို့၏ သဘောထား မည်သို့မျှ ပြောင်း လဲမှု ရှိမည်မဟုတ်ဟု ပါရှိလာခဲ့သည်။
အာဆီယံ ပါလီမန် အမတ်များက လည်း ထိုသို့ လူမဆန်သည့် လုပ်ရပ်အပေါ် တုန်လှုပ်မိကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြော ဆိုလာကြသည်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ (NUCC) နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (CRPH) တို့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ကာ တရားဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ် ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး သမားများသည် တဖြေးဖြေး နှင့် ကမ္ဘာအလယ်တွင် လူရုပ်မပေါ်၊ လူလုံးမလှ ဖြစ်လာနေသည်။မင်းအောင်လှိုင်သည် တိုင်းပြည်ကို rule of law ဟုဆိုသော တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဖြင့် အုပ်ချုပ်သွားရေးကို လုံးဝ အယုံအကြည် ရှိသူ မဟုတ်၊ ၎င်း သည် rule of men ဆိုသည့် မည်သူက လူထုကို မလှန်ရဲအောင် အုပ်ချုပ်နိုင်သလဲ ဆိုသည်ကိုသာ ယုံကြည် အားထားသူ ဖြစ်နေသည်။ ဤသည်ကို သိထား၍လည်း သူ၏လက် အောက်ရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက သူ့ထက်ငှာ လက်စွမ်းပြနေကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
သူသည်သာ အကြွင်းမဲ့ အာဏာကို ဆုတ်ကိုင်ထားလိုသူ ဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို မည်သူမျှ အယုံအကြည် မရှိ ကြတော့သည့် အထိ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ စိတ်ကူးများသည် ချက်ချင်း ဆိုသလို ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီး၏ အမိန့် ကြေညာစာများ တွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ အဖြစ် ပါရှိလာစမြဲ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် မင်းအောင်လှိုင်သည် ယခုအခါ ဗိုလ်သန်းရွှေ ကိုပင် ကျော်လွန်ကာ နေဝင်း စတိုင် ဖြင့် အားလုံးက သူ့အား ကြောက်ရွံ့ရပြီး တသွေးတသံတမိန့် ဖြင့် ၁၉၈၈ အုပ်ချုပ်‌ရေး ပုံစံမျိုး ပြန်သွားရန် ရည်ရွယ်နေသည်။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းလှိုင်အားလည်း ညီဖြစ်သူကို ၎င်းတို့ဖက်မှ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု ကြောင့် သူ့အပေါ် ရင်ထဲက ကြိတ်၍ ညှိုးနေမည်ဟု ယုံကြည်ကာ တဖြေးဖြေး နှင့် ပါးနပ်စွာ ရာထူး တခုပြီး တခု ဖြုတ်ချခဲ့ရာ ယခုဆို အရပ်သား လုံးလုံး ဖြစ်သွားခဲ့ချေပြီ။
ထိုသို့ မင်းအောင်လှိုင် ၏ တကိုယ်တော် ထင်တိုင်းကြဲနေမှုများကြောင့် ၎င်းတို့ အနေအထားသည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ တွင် ဆုတ်ယုတ်လာချိန်၌ အမျိုးသား ညီညွတ်‌ရေး အစိုးရ က ၎င်းတို့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများ တွင် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ကပင် လွန်စွာ အရေးပါသော ခြေလှမ်းကြီး ဖြစ်ပြီး တော်လှန်‌ရေး ကြီး အောင်မြင်သွားသည်နှင့် လစ်ဟာသွားနိုင်သည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို အလျှင်အမြန် တာဝန်ယူနိုင်မည်။ ထိုသို့ အရံသင့် ရှိနေခြင်းကပင် မြန်မာတို့၏ တော်လှန်‌ရေး ကို ထောက်ခံနေကြသည့် ပြည်ပ နိုင်ငံကြီးများ၏ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေမှုများကို ပြေလျော့ သွားစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုမျှ မကသေး အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရသည် အာဏာရှင်အား တွန်းလှန်လိုသော စိတ်သက်သက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် firebrand သွေးကြွနေသူများ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်အား နိုင်နင်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစိုးရ ဖြစ်ကြောင်း ကို ထိန်းချုပ်နယ်မြေများ ဖြစ်သော စစ်ကိုင်း၊ မကွေး ဒေသကြီးများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ကယား နှင့် ကရင်ပြည်နယ်များ အတွင်း CDM ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည့် ပညာရေး ကွန်ယက်များဖြင့် ကျောင်းများကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် သက်သေပြ လာခဲ့သည်။
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရသည် တော်လှန်ရေးကိုသာ ဇောက်ချလုပ်သင့်ပြီး လက်တွေ့နှင့် ကင်းကွာသည့် လုပ်ရပ်များ ကို အာရုံမစိုက်သင့်ဟု ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသော်လည်း မိမိတို့သည် တိုင်းပြည်ကို နိုင်နင်းစွာ အုပ်ချုပ် နိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ရန်လည်း ယာယီ ဖွဲ့စည်းပုံ အပါအဝင် လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်သည်ကို နိုင်ငံတကာအား ပြသနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေသည်။
သို့မဟုတ်ပါက စစ်တပ်အား အာဏာမှ ဖယ်ရှားပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော အာဏာ လေဟာနယ်ကြီး အတွင်း တိုင်းပြည်သည် ကသောင်းကနင်း ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်သွားမည်ကို အနောက်နိုင်ငံကြီး အချို့က စိုးရိမ်နေ သည်။ ၎င်းတို့အား လက်ညှိုးထိုးခံရမည့် အရေးကြောင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ကူညီရမည်ကို လက်တွန့်နေကြသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အခါအားလျှော်စွာ တွေ့ဆုံပြီး တီးခေါက် နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အပြောနှင့် မလုံလောက်၊ လက်တွေ့ လုပ်ပြနိုင်မှလည်း ဖြစ်မည် ဆိုသည်ကို သဘောပေါက်ထားကြရန် လိုအပ်ပေသည်။ယခုပင် အရှေ့တောင်အာရှ သို့ ခရီးလှည့်လည်နေသော အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အကြံပေး ဒဲရက် ရှိုလက်မှ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အား အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရနှင့် လူသိရှင်ကြား ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေ့နေ့တွင် အာဆီယံသည် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသော အကူအညီများကို အကြမ်းဖက် စစ်အုပ် ချုပ်ရေး အဖွဲ့မှ တဆင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော မကွေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူး ဒေသကြီးများ နှင့် ကယား နှင့် ကရင်ပြည်နယ်များသို့ ပေးအပ်သွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီး နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူ တသိန်းခန့်ရှိသည့် ချင်းပြည်နယ်အား ချန်လှပ်ထားခဲ့မှု အပေါ် မေးခွန်းထုတ်လာကြသည်။
ဤသည်ကပင် အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုသည် အကူအညီပေးရေး အပေါ် စစ်ရေးစီမံချက်များ ရောယှက်ထားပြီး ၎င်းတို့အတွက် မဟာဗျူဟာကျသော နယ်မြေများ အတွင်းကိုသာ ထိုး‌ဖောက်လိုနေသည်မှာ ထင်ရှားနေ ပေသည်။
ပြည်သူတို့၏ တရားသောစစ် မုချအောင်ရမည်!!!credit-Hla Soewai
ဝါရှငျတနျ ပို့ဈ သတငျးစာ ကွီး၏ အယျဒီဝာာ အာဘျောမှ ပွညျ့သူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ကိုဖွိုးဇယြောသျော နှငျ့ ၈၈ မြိုးဆကျ ကြောငျးသား အဖှဲ့ အား ဦးဆောငျသူ တဦး ဖွဈသူ ကိုဂငျြမီ တို့အား ကွိုးစငျသို့ ပို့မညျ ဆိုလြှငျ မွနျမာသညျ ဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးသို့ ပွနျလညျ သှားနိုငျကောငျးသညျ ဆိုသော နောကျဆုံးလကျကနျြ အလားအလာမြားကို အသူရာ နကျသညျ့ ခြောကျကွီးထဲသို့ ပွဈခလြိုကျခွငျးသာ ဖွဈလိမျ့မညျဟု သတိပေး လာခဲ့သညျ။
ထိုသို့ ကှပျမကျြရနျ ကွံစညျနမှေု ကဲ့သို့ မတရား အနိုငျကငျြ့ ဥပဒမေဲ့ လုပျရပျမြားကို “တရားမဝငျ အစိုးရ” ဟု ချေါဝျေါ ကာ ရှုတျခလြာသညျ့ ပွငျသဈ သံရုံးအားလညျး နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေး ထိခိုကျနိုငျသညျဆိုကာ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ မဆကျဆံက ပွငျသဈ အတှကျပငျ အကြိုးယုတျဖှယျ ရှိသညျ့ ပုံစံဖွငျ့ ကနျ့ကှကျကွောငျး ကွညောခကျြ ထုတျပွနျ လာခဲ့ပွနျသညျ။ အလားတူ အမရေိကနျ နှငျ့ ကုလသမဂ်ဂအားလညျး “မစဉျးစား မဆငျခွငျ လကျလှတျစပယျ ပွောဆိုသူမြား” ဟု ကငျပှနျးတပျလိုကျ ပွနျသညျ။
ဤသညျကို တုနျ့ပွနျသညျ့ အနဖွေငျ့ ပွငျသဈ အစိုးရ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန က သံရုံး ကွညောခကျြအတိုငျး ပငျ ထပျမံ၍ မွနျမာနိုငျငံရှိ တရားမဝငျ အစိုးရ အကောငျအထညျ ဖျေါနသေညျ့ အကွောကျတရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခုခံ ရငျဆိုငျနကွေသော မွနျမာ ပွညျသူမြား၏ သတ်တိကို လေးစား ဂုဏျပွုပွီး မိမိတို့၏ သဘောထား မညျသို့မြှ ပွောငျး လဲမှု ရှိမညျမဟုတျဟု ပါရှိလာခဲ့သညျ။
အာဆီယံ ပါလီမနျ အမတျမြားက လညျး ထိုသို့ လူမဆနျသညျ့ လုပျရပျအပျေါ တုနျလှုပျမိကွောငျး ထုတျဖျေါပွော ဆိုလာကွသညျ။ အမြိုးသား ညီညှတျရေး အတိုငျပငျခံ ကောငျစီ (NUCC) နှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားပွု ကျောမတီ (CRPH) တို့က ကွညောခကျြ ထုတျပွနျကာ တရားဥပဒမေဲ့ လုပျရပျအဖွဈ ရှုတျခခြဲ့ကွသညျ။
စဈအုပျခြုပျရေး သမားမြားသညျ တဖွေးဖွေး နှငျ့ ကမ်ဘာအလယျတှငျ လူရုပျမပျေါ၊ လူလုံးမလှ ဖွဈလာနသေညျ။မငျးအောငျလှိုငျသညျ တိုငျးပွညျကို rule of law ဟုဆိုသော တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဖွငျ့ အုပျခြုပျသှားရေးကို လုံးဝ အယုံအကွညျ ရှိသူ မဟုတျ၊ ၎င်းငျး သညျ rule of men ဆိုသညျ့ မညျသူက လူထုကို မလှနျရဲအောငျ အုပျခြုပျနိုငျသလဲ ဆိုသညျကိုသာ ယုံကွညျ အားထားသူ ဖွဈနသေညျ။ ဤသညျကို သိထား၍လညျး သူ၏လကျ အောကျရှိ စဈဗိုလျခြုပျမြားက သူ့ထကျငှာ လကျစှမျးပွနကွေခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။
သူသညျသာ အကွှငျးမဲ့ အာဏာကို ဆုတျကိုငျထားလိုသူ ဖွဈလာပွီး နိုငျငံ၏ တရားစီရငျရေး စနဈကို မညျသူမြှ အယုံအကွညျ မရှိ ကွတော့သညျ့ အထိ ဇောကျထိုးမိုးမြှျော ဖွဈအောငျ ဖနျတီးလာခဲ့သညျ။ ၎င်းငျး၏ ကပေါကျတိ ကပေါကျခြာ စိတျကူးမြားသညျ ခကျြခငျြး ဆိုသလို ဝနျကွီးဌာန အသီးသီး၏ အမိနျ့ ကွညောစာမြား တှငျ လိုကျနာရမညျ့ စညျးမဉျြး စညျးကမျး မြား အဖွဈ ပါရှိလာစမွဲ ဖွဈသညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယခုအခါ ဗိုလျသနျးရှေ ကိုပငျ ကြျောလှနျကာ နဝေငျး စတိုငျ ဖွငျ့ အားလုံးက သူ့အား ကွောကျရှံ့ရပွီး တသှေးတသံတမိနျ့ ဖွငျ့ ၁၉၈၈ အုပျခြုပျ‌ရေး ပုံစံမြိုး ပွနျသှားရနျ ရညျရှယျနသေညျ။
ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး သနျးလှိုငျအားလညျး ညီဖွဈသူကို ၎င်းငျးတို့ဖကျမှ သတျဖွတျခဲ့မှု ကွောငျ့ သူ့အပျေါ ရငျထဲက ကွိတျ၍ ညှိုးနမေညျဟု ယုံကွညျကာ တဖွေးဖွေး နှငျ့ ပါးနပျစှာ ရာထူး တခုပွီး တခု ဖွုတျခခြဲ့ရာ ယခုဆို အရပျသား လုံးလုံး ဖွဈသှားခဲ့ခပြွေီ။
ထိုသို့ မငျးအောငျလှိုငျ ၏ တကိုယျတျော ထငျတိုငျးကွဲနမှေုမြားကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့ အနအေထားသညျ ပွညျတှငျး ပွညျပ တှငျ ဆုတျယုတျလာခြိနျ၌ အမြိုးသား ညီညှတျ‌ရေး အစိုးရ က ၎င်းငျးတို့ ထိနျးခြုပျနယျမွမြေား တှငျ ပွညျသူ့ရဲတပျဖှဲ့ ကို ဖှဲ့စညျးသှားမညျ ဖွဈသညျဟု ကွညောခကျြ ထုတျပွနျလာခဲ့သညျ။ ဤသညျကပငျ လှနျစှာ အရေးပါသော ခွလှေမျးကွီး ဖွဈပွီး တျောလှနျ‌ရေး ကွီး အောငျမွငျသှားသညျနှငျ့ လဈဟာသှားနိုငျသညျ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို အလြှငျအမွနျ တာဝနျယူနိုငျမညျ။ ထိုသို့ အရံသငျ့ ရှိနခွေငျးကပငျ မွနျမာတို့၏ တျောလှနျ‌ရေး ကို ထောကျခံနကွေသညျ့ ပွညျပ နိုငျငံကွီးမြား၏ စိုးရိမျမကငျး ဖွဈနမှေုမြားကို ပွလြေော့ သှားစနေိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
ထိုမြှ မကသေး အမြိုးသား ညီညှတျရေး အစိုးရသညျ အာဏာရှငျအား တှနျးလှနျလိုသော စိတျသကျသကျဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ firebrand သှေးကွှနသေူမြား မဟုတျဘဲ တိုငျးပွညျအား နိုငျနငျးစှာ အုပျခြုပျနိုငျရနျ စနဈတကြ ပွငျဆငျထားသညျ့ အစိုးရ ဖွဈကွောငျး ကို ထိနျးခြုပျနယျမွမြေား ဖွဈသော စဈကိုငျး၊ မကှေး ဒသေကွီးမြား၊ ရှမျးပွညျနယျ တောငျပိုငျး၊ ကယား နှငျ့ ကရငျပွညျနယျမြား အတှငျး CDM ပညာရေး ဝနျထမျးမြား ပါဝငျသညျ့ ပညာရေး ကှနျယကျမြားဖွငျ့ ကြောငျးမြားကို ပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈ သငျကွားပေးနိုငျခွငျးဖွငျ့ သကျသပွေ လာခဲ့သညျ။
အမြိုးသား ညီညှတျရေး အစိုးရသညျ တျောလှနျရေးကိုသာ ဇောကျခလြုပျသငျ့ပွီး လကျတှနှေ့ငျ့ ကငျးကှာသညျ့ လုပျရပျမြား ကို အာရုံမစိုကျသငျ့ဟု ဝဖေနျမှုမြား ရှိနသေျောလညျး မိမိတို့သညျ တိုငျးပွညျကို နိုငျနငျးစှာ အုပျခြုပျ နိုငျသူမြား ဖွဈသညျ။ ထိုသို့ အုပျခြုပျသှားနိုငျရနျလညျး ယာယီ ဖှဲ့စညျးပုံ အပါအဝငျ လိုအပျသော အခွခေံ အဆောကျအအုံမြား အဆငျသငျ့ ပွငျဆငျထားပွီး ဖွဈသညျကို နိုငျငံတကာအား ပွသနိုငျဖို့ လိုအပျနသေညျ။
သို့မဟုတျပါက စဈတပျအား အာဏာမှ ဖယျရှားပွီးနောကျ ဖွဈပျေါလာသော အာဏာ လဟောနယျကွီး အတှငျး တိုငျးပွညျသညျ ကသောငျးကနငျး ထိနျးမနိုငျ သိမျးမရ ဖွဈသှားမညျကို အနောကျနိုငျငံကွီး အခြို့က စိုးရိမျနေ သညျ။ ၎င်းငျးတို့အား လကျညှိုးထိုးခံရမညျ့ အရေးကွောငျ့ ထဲထဲဝငျဝငျ ကူညီရမညျကို လကျတှနျ့နကွေသညျ။
ထို့ကွောငျ့လညျး အမြိုးသား ညီညှတျရေး အစိုးရ အဖှဲ့ဝငျမြား နှငျ့ အခါအားလြှျောစှာ တှဆေုံ့ပွီး တီးခေါကျ နကွေခွငျး ဖွဈသညျ။ သို့သျော အပွောနှငျ့ မလုံလောကျ၊ လကျတှေ့ လုပျပွနိုငျမှလညျး ဖွဈမညျ ဆိုသညျကို သဘောပေါကျထားကွရနျ လိုအပျပသေညျ။ယခုပငျ အရှတေ့ောငျအာရှ သို့ ခရီးလှညျ့လညျနသေော အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန၏ အကွံပေး ဒဲရကျ ရှိုလကျမှ အာဆီယံ အဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံမြား အား အမြိုးသား ညီညှတျရေး အစိုးရနှငျ့ လူသိရှငျကွား ဆကျသှယျ ဆောငျရှကျသှားကွရနျ တိုကျတှနျးသှားခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။
တနင်ျဂနှနေ့တှေ့ငျ အာဆီယံသညျ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားသော အကူအညီမြားကို အကွမျးဖကျ စဈအုပျ ခြုပျရေး အဖှဲ့မှ တဆငျ့ ပဋိပက်ခဖွဈပှားနသေော မကှေး၊ စဈကိုငျး၊ ပဲခူး ဒသေကွီးမြား နှငျ့ ကယား နှငျ့ ကရငျပွညျနယျမြားသို့ ပေးအပျသှားမညျဟု ကွညောခဲ့ပွီး နရေပျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးနရေသူ တသိနျးခနျ့ရှိသညျ့ ခငျြးပွညျနယျအား ခနျြလှပျထားခဲ့မှု အပျေါ မေးခှနျးထုတျလာကွသညျ။
ဤသညျကပငျ အကွမျးဖကျ စဈအုပျစုသညျ အကူအညီပေးရေး အပျေါ စဈရေးစီမံခကျြမြား ရောယှကျထားပွီး ၎င်းငျးတို့အတှကျ မဟာဗြူဟာကသြော နယျမွမြေား အတှငျးကိုသာ ထိုး‌ဖောကျလိုနသေညျမှာ ထငျရှားနေ ပသေညျ။
ပွညျသူတို့၏ တရားသောစဈ မုခအြောငျရမညျ!!!credit-Hla Soewai
အိန္ဒိယက ဝက်ဏမောင်လွင် မျက်နှာကို အိုးမဲနှင့်သုတ်လိုက်ပြန်ပီ